လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပေါ်လွင်အောင် သီချင်းလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီး Tik Tokဆော့ပြထားတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ – Online News Post
လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပေါ်လွင်အောင် သီချင်းလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီး Tik Tokဆော့ပြထားတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
Miss နန်းခင်ဇေယျာ က တော့ တုနှိုင်း မမှီတဲ့ သူမရဲ့ ကောက် ကြောင်း အလှ တွေကို မြန်မာ ဝတ်ဆုံလေး ဝတ်ပြီး ပြသ လိုက်ပါပြီ ။ နန်းခင် က Miss တစ်ယောက် မှာ ရှိသင် တဲ့ အရည် အချင်း တွေနဲ့ ပြည့်စုံ ပြီး လှရက် လွန်းသူလေးမို့ ပုရိသ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးဝန်းရံ မှုကို ရရှိသူပါ ။ နန်းခင် ကလည်း သူမ ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အမြဲ လှ နေအောင် နေတတ် သူပါ ။
နန်းခင်က လက်ရှိ မှာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေကို ခေတ္ တရပ်နားထားပြီး ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ဦးစည်း လုပ်ကိုင် နေတာပါ ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် လည်း အဖက်ဖက် က ပြည့်စုံ လွန်းတဲ့ သူမရဲ့ အရည်အချင်း တွေက အံ့မခန်း ပါပဲ ။ နန်းခင်က ပရိသတ်တွေ အလွမ်းပြေ ကြည့် ရှုရင်း အချစ်ပို စေဖို့အ တွက် ပုံရိပ်အလှလေး တွေကို တင်ပေးတတ် သလို Tiktok ဗီဒီယိုလေး တွေကိုလည်း ရိုက်ကူး တင်ပေးလေ့ ရှိတာပါ … .
ယခုမှာ ဆိုရင်လည်း နန်းခင် က နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် စိုင်းစိုင်း ရဲ့ တေးသီချင်း လေးနဲ့ အမိုက်စား ဆော့ကစား ထားပါ သေးတယ် ။ ဒါ က တော့ ကိုယ် ခန္ဓာ ကောက် ကြောင်း အလှတွေ ကို ပေါ်လွင်စေ တဲ့ မြန်မာဝတ်စုံ လေးတဲ့ လှရက် လွန်းနေပြီး သီချင်းလေး အတိုင်း ဟန်ချက် ညီညီ ဆော့ ကစားထား တာဖြစ် လို့ အဆို ပါ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကို ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှု စေဖို့အတွက် ပြန်လည် တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
Miss နန္းခင္ေဇယ်ာ က ေတာ့ တုႏွိုင္း မမွီတဲ့ သူမရဲ့ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ေတြကို ျမန္မာ ဝတ္ဆုံေလး ဝတ္ၿပီး ျပသ လိုက္ပါၿပီ ။ နန္းခင္ က Miss တစ္ေယာက္ မွာ ရွိသင္ တဲ့ အရည္ အခ်င္း ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံ ၿပီး လွရက္ လြန္းသူေလးမို႔ ပုရိသ ပရိသတ္ေတြရဲ့ တစ္ခဲနက္ အားေပးဝန္းရံ မႈကို ရရွိသူပါ ။ နန္းခင္ ကလည္း သူမ ရဲ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ အျမဲ လွ ေနေအာင္ ေနတတ္ သူပါ ။
နန္းခင္က လက္ရွိ မွာ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို ေခတ္ တရပ္နားထားၿပီး ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ဦးစည္း လုပ္ကိုင္ ေနတာပါ ။ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ လည္း အဖက္ဖက္ က ျပည့္စုံ လြန္းတဲ့ သူမရဲ့ အရည္အခ်င္း ေတြက အံ့မခန္း ပါပဲ ။ နန္းခင္က ပရိသတ္ေတြ အလြမ္းေၿပ ၾကည့္ ရႈရင္း အခ်စ္ပို ေစဖို႔အ တြက္ ပုံရိပ္အလွေလး ေတြကို တင္ေပးတတ္ သလို Tiktok ဗီဒီယိုေလး ေတြကိုလည္း ရိုက္ကူး တင္ေပးေလ့ ရွိတာပါ … .
ယခုမွာ ဆိုရင္လည္း နန္းခင္ က နိုင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ စိုင္းစိုင္း ရဲ့ ေတးသီခ်င္း ေလးနဲ႔ အမိုက္စား ေဆာ့ကစား ထားပါ ေသးတယ္ ။ ဒါ က ေတာ့ ကိုယ္ ခႏၶာ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွေတြ ကို ေပၚလြင္ေစ တဲ့ ျမန္မာဝတ္စုံ ေလးတဲ့ လွရက္ လြန္းေနၿပီး သီခ်င္းေလး အတိုင္း ဟန္ခ်က္ ညီညီ ေဆာ့ ကစားထား တာျဖစ္ လို႔ အဆို ပါ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလးကို ပရိသတ္ ေတြ ၾကည့္ရႈ ေစဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုရိသတို့မျက်လုံးပြူးသွားအောင် ရုတ်တရက်ရင်နှစ်မွှာကို လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
Next post စွဲမက်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ အကြမ်းစားပုံလေးတွေ တင်လိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ